कोरोना अपडेटः पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या १२० | Kendrabindu Nepal Online News
कोरोना अपडेटः पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या १२०
३ भाद्र २०७७, बुधबार १७:२६
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय २० जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय २० जना डिस्चार्ज भएका हुन् । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार १ सय ४४, प्रदेश नम्बर २ मा ३ हजार ७ सय ९३, वाग्मती प्रदेशमा ७ सय २४, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६८, प्रदेश नम्बर ५ मा ४ हजार २ सय ९०, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार २ सय २० जना गरी १७ हजार ७ सय जना रहेका छन् ।
कति नयाँ संक्रमित थपिए ?
बुधबार ६ सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जस्मध्ये २ सय १६ महिला र ४ सय ६५ जना पुरुष रहेका छन् । आज मात्रै काठमाडौंमा १ सय ३४, ललितपुरमा १७ र भक्तपुरमा ८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । योसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या २८ हजार ९ सय ३८ पुगेको छ ।
परीक्षण अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ५ सय २२ पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । योसँगै देशभर ५ लाख ८४ हजार ३ सय ८८ पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
देशभर आइसियुमा १ सय ३१ र भेन्टिलटरमा ६ जना जना संक्रमितले उपचार गराउँदै आएका छन् । साथै ११ हजार १ सय १८ जना आइसोेलेसनमा रहेका छन । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार ६०, प्रदेश नम्बर २ मा २ हजार ३७, वाग्मती प्रदेशमा २ हजार ६ सय ८९, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ८८ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ८ सय ३८, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ सय ३० गरी संस्थागत आइसोलेसनमा ७ हजार ९ सय ८७ जना रहेका छन ।
त्यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर १ मा २ सय ५, प्रदेश नम्बर २ मा २ हजार ५ सय ४५, वाग्मती प्रदेशमा १ सय ११ र गण्डकी प्रदेशमा २७, प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ४, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ गरी ३ हजार १ सय ३१ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन ।
देशभर कतिले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए ?
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार काठमाडौं र बर्दियामा १—१ जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । यस्तै मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीमा १—१ जना महिला गरी ६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । योसँगै देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २० पुगेको छ ।
देशभर क्वारेन्टाइनमा कति रहेका छन् ?
आज देशभरीका क्वारेन्टाइनमा १३ हजार ५ सय ७१ जना रहेका छन । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार १ सय १६, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ४ सय ८५, वाग्मती प्रदेशमा ९ सय ४९, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ९ सय २, प्रदेश नम्बर ५ मा १ हजार ९ सय ३१, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय २३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ६५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
Prevप्रेमजालमा फसाएर बलात्कार गरी बेचबिखन गर्ने तामाङ पक्राउ
विश्वमा सबैभन्दा धेरैलाई लागेका ७ क्यान्सर (भिडियोसहित)Next
कोरोना अपडेटः पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि